Tuesday May 08, 2018 - 03:53:22 in Wararka by Super Admin
Waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago dareen aad iiga yaabiyey umadaha meel uun baa bedqabta oo lagu baxsadaa bal bulshada waydiinayaa umada tijaarkeedii uu yahay kaas shixir bararka inagu laayey ee lacagtii umada gurtay iyo kaas shidaalka qudhmay inoo keenay iyo kuwaas iyagoo gurigii ugu quruxda badnaa leh haddana dariiqii gurigiisa quruxda u ahaa xidhaaya badhna noobiyadii dayranaaya, qaar ay schooladii caruurtu u dhigan lahaayeen iibsanaya waxan ay baabi inayaana dhamaan ay tahay wixii ay cid kaleba daayoo ay iyagu uga baahida badnaayeen.
Ee culimadii ay yihiin kuwaa aan garanayn umada ka shaqaysanaysaan haddii aad lacagtii iyo culima idinku u tihiin wax munaasib ahna u keena ilaahayna kaga yaaba .
Ee baarlamaankeedii yahay kaas maalina mooshin soo dhigaaya maalinta ku xigtana la iibsanaayo ee aan garanayn shalay baad umada wax khaldan u sheegaysay oo aad u muuqatay mid masuuliyada saaran garanaya ee maantana ka ugu qaadashada badan ha noqonin " marka horena waad ugu qaylo dheer tihiin marka dambana waa gacan dheer tihiin " ay kuwaasi xeer dejin u yihiin nimankii wadanka ilaalinaayey .
Dawladii timaadaaba noqoto mid wax guranaysa oo aan hareerahaba eegayn ee bartimaadkeedu yahay qoladii hore wax walba way qaateene oo reerohoodii way taajireene adna reerkaaga u rar oo shilinkii soo baxaaba uu mid qoyskiisa ah la doonanaayo .
Ee goleyaashii deegaanka maayiradii ay yihiin inay magaalo dhisaan daaye magaalooyinkii baabi iyey ee waliba ku faanaaya waxay rogeen ..
Mucaaridkeenii yahay kaas aanay waxba kala sokayn isaga iyo cadawga somaliland markaad aragto facilka uu samaynaayo .
Bulshadii hadli lahayd ee laga baqan lahaa ay tahay tan xumihii iyo samihii iska qaldameen ee wax walba taageeraysa kii gawracaayey, iyo kii mindida lagu gawracaayo keenayey iyo kii lugaha iyo gacmaha isku xidhaayey mid walba taageeraysa .
Marka xaalku sidaa yahay ee aanay jirin cid lagu baxsado oo ah intii loo irkan lahaa maxaa naf inoo ah , waxan is leeyahay wax keliya ee aynu ku sii jiraa waa ta ilaahay oo aan ka dhigin caynka aynu wax u wadnee inagu xageenii way isu dhamaynay waxa kaga baxayaa maqaalkayga allow lagu cuskay .